कुन महिनामा जन्मेका व्यक्ति अधिक सफल हुन्छन ? यस्तो छ राज – Online Khabar 24
कुन महिनामा जन्मेका व्यक्ति अधिक सफल हुन्छन ? यस्तो छ राज
पहिले माथि follow गर्दिनुस,
पछिल्लो समयलाई हामी विज्ञान तथा प्रविधिको युगको रुपमा लिने गर्छौ।
तर संसार विज्ञान प्रविधीसँग अभ्यस्त भइसके पनि हामी अझै पनि हाम्रो चाल, चलन तथा ज्योतिषशास्त्रलाई विश्वास गर्छौ। एक हिसाबले हेर्ने हो भने ज्योतिष शास्त्रपनि एक विज्ञान मानिन्छ।
त्यसैले यो विज्ञानप्रति धेरैको चासो तथा विश्वास पनि रहेको छ। आज हामी ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कुन महिनामा जन्मेका महिला कस्तो स्वभावका हुन्छन् भन्ने बारे उल्लेख गर्दैछौँ।
बैशाख – यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरु प्राय जसो सुन्दर आँखा भएका सरल स्वभाव र गुणवान् हुन्छन्। कम खर्च गर्ने थोरै कुराले समस्या टार्ने गुण यिनीहरूको हुन्छ। यो महिना जन्मेका महिलाले योग्य र राम्रो ब्यवहार भएको श्रीमान् पाउँछन् ।
क्रोध बढी भए पनि श्रीमान् बुझ्ने र शिक्षित भएको कारण घर झगडा खासै हुदैनन्। जीवनमा धन र सुख प्रशस्त प्राप्त गर्दछन्।जेष्ठ – यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरू तिष्ण बुद्धि भएका हुन्छन्। उनीहरूको जीवनमा सुख र सम्पती सहज तरिकाले प्रप्त गर्छन। यो महिना जन्मेको महिलाहरु सधै सफलता हातपार्छन्।
धार्मिक रुपमा बढी आस्था राख्ने गर्दछन्। जीवन साथीको राम्रो साथ पाउँछन्। उनीहरूका श्रीमान् धर्मप्रती त्यती आस्था नराख्ने भएको कारण कहिले काँही मनमुटब हुन्छन्।
अषाढ – यो महिना जन्मेका महिलामा बोलीमा कादम्बरीको जस्तै जादु हुन्छन्। बोलीले गर्दा हरेक ठाउँमा सफल्ता पाउँछन्। श्रीमान् राम्रो स्वभाबको पाउँछन्। कडा मेहनत र संघर्ष गरे पनि मेहनत अनुसारको सुख पाउँन सक्दैनन्। यिनीहरूले धन जम्मा गर्न सक्दैनन्।
साउन – यो महिनालाई पवित्र र शुभ महिना मानिन्छ। यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरू राम्रो र धार्मिक काममा बढी रुचि राख्ने स्वभाबको हुन्छ। यो महिना जन्मेका महिलाले सुख, दुःख, फइदा र नोक्सान समान रुपले भोग्नु पर्छ। सन्तानबाट सुख प्रप्त गर्छन्। यो महिना जन्मेको महिलाहरु धेरै जसो समय कुनै न कुनै बिरामीबाट ग्रसित हुन्छन्। श्रीमान् र प्रेमीबाट धेरै मायाको आश राख्ने स्वभाबको हुन्छन्।
भाद्र – मिठो बोली र सरल स्वाभाबको उनीहरुको यो महिनामा जन्मेका महिलाको गुण हो। यो महिना जन्मेको महिलाले प्रेमी र श्रीमान बाट धेरै सुख र माया प्राप्त गर्छन्। घरपरिवार सासु ससुराबाट माया र सम्मान प्राप्त गर्छन्। यी महिलाहरू अलि जिद्दी स्वभावका हुन्छन्।
उनीहरूको जिद्दीका कारण धेरैपटक घर झगडा भए पनि परिवारबाट प्रसंशा भने पाइरहन्छन्।असोज – यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरूको स्वभाव चञ्चले हुन्छ। कसैसँग बोल्दा सर्तक भएर बोल्ने गर्छन्। यो महिनामा जन्मेको महिलाले धन प्राप्त गर्नुका साथै श्रीमानबाट सन्तुष्ट मिल्छ। आफनो सन्तानबाट भने चिन्तित हुन्छन्।
कार्तिक – कार्तिकमा जन्म लिने महिला धनवान र बुद्धिमानी हुन्छन्। उनीहरू धेरै कलामा पोख्त हुन्छन्। मिठो बोल्ने गर्छन्। सामान्य तय यी महिलाहरूले आफ्ना श्रीमानलाई आफ्नो अधिनमा राख्न खोज्ने स्वभावका हुन्छन्। घरपरिवार सासु ससुरासँग पनि झगडा गर्ने तथा झगडालु हुन्छन्।
उनीहरूमा खोकीको बिमारी बढी देखिने गर्छ।मंसिर – यो महिनामा जन्म लिने महिलाहरू नरम स्वभावका हुन्छन्। यी महिलाहरू बिस्तारै कुरा गर्छन्। उनीहरूलाई झुटो बोल्न जान्दैनन्। धार्मिक काममा बढी रुचि भएका हुन्छन्। धेरै धन कमाए पनि सञ्चित त्यती हुँदैन। उनीहरूलाई पेटसम्बन्धी समस्या बढी देखिने गर्छ।
पुष – यो महिनामा जन्मेका महिला बढी रिसाहा हुन्छन्। यिनीहरू आफ्नै कामबाट भाग्य खोज्छन्। सबैसँग राम्रो ब्याबहार गर्छन्। समाजमा मान सम्मान पाउँछन्। टाउको दुख्ने, वायु र वाथ रोगको समस्या यिनीहरूमा बढी हुन्छ।माघ – सुन्दर अनुहारका हुन्छन्। सरल र सहज स्वभावका हुन्छन्।
तर, अलि जिद्दी स्वभाव हुन्छन्। अरुलाई कुरा गर्दा पुरा कुरा गर्न नदिने स्वभावका हुन्छन्। अरुका कुरा काटेर अफुबाठो हुन खाज्ने बानी यिनीहरूमा हुन्छ। यो महिनामा जन्मिएको महिलाहरुको स्वास्थ्य त्यती राम्रो हुदैन। बेला बखत बिरामी भइराख्ने गर्छन्।
फाल्गुन – फागुन महिनामा जन्मिएका महिला धेरै दयावान हुन्छन्। सहयोग गर्ने स्वभाबको हुन्छन्। अरुको दुःखमा बढी चिन्ता लिने गर्छन्। उनीहरूको स्वभाव र विचार बढी धार्मिक हुन्छन्। तर,श्रीमान् धर्म प्रती त्यती आस्था राख्ने हुदैन। यी महिलाहरू पढाइ लेखाइमा तेज हुन्छन्।
चैत – चैत्र महिनामा जन्मिएका महिलाहरु चलाख हुन्छन्। सुन्दर र चञ्चल स्वभावका कारण अरुलाई छिटो आर्कषित गर्छन्। धनबाट पनि उनीहरू लाभान्वित हुन्छन्। कहिलेकाहीँ उनीहरूमा रिसको कारण घर झगडा हुने गर्छ। यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevकार्तिक लागेकै दिन अचम्म भयो, दुईग्रह मिलेर यी राशिलाई बनाउने भए मालामाल !
nextपिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिंदैन ?